Momba anay - Hebei Bocheng mpiara-mamorona fandrefesana fitaovana manamboatra Co., Ltd.
Hatramin'ny nijoroany tamin'ny taona 2001, Hebei Bocheng Co-famokarana fandrefesana fitaovana manamboatra Co., Ltd. dia nahavita rakitsoratra tsy manam-paharoa ho mpanamboatra karazana fitaovana fandrefesana marimarina. Rehefa afaka 10 taona mahery ny fanavaozana sy ny fampandrosoana mitohy, ny orinasa dia namorona rafitra entity miaraka amin'ny ambaratongam-pamokarana. Eo amin'ny sehatra mandroso eto an-toerana isika, indrindra amin'ny lafiny fahaiza-manavao, tanjaka ara-teknika ary traikefa amin'ny famokarana, sns.
Izahay dia manamboatra fitaovana fandrefesana marobe isan-karazany, ao anatin'izany ny takelaka vy, ny takelaka ambony granita, ny latabatra fangarony, ny latabatra fanodinana 3D sy 2D miaraka amina fametahana sy fametahana, granite namboarina sy ampahany amin'ny milina vy, vy vy namboarina, karazana vy hafa sy fitaovana fandrefesana granite. Ny orinasanay koa dia manao famolavolana, fampandrosoana ary famokarana vokatra amam-panao ary manome vahaolana tanjona manokana amin'ny tsipika famokarana mifandraika amin'izany.
Ny vokatra vokarin'ny orinasanay dia mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny indostria mifandraika amin'izany eto amin'ny firenena. Ny orinasanay koa dia manana laboratoara mahaleo tena, ary nanafatra fitaovam-pamokarana mandroso marobe. Miaraka amin'ny maodely fitantanana tsara sy rafitra famokarana mandroso, ny kalitaon'ny milina sy ny fotoana fandefasana dia azo antoka. Noho io antony io dia eken'ny mpanjifa hatrany ny marika ao amin'ny orinasa sy ny any ivelany. Izahay koa dia manao famokarana OEM ho an'ny marika eto an-toerana sy any ivelany.Ny orinasa dia nampihatra foana: "ny kalitao mitovy, ny vidiny ambany, ny vidiny mitovy, ny kalitao avo lenta" filozofia, ary maka ny foto-kevitry ny "fahamendrehana, tolona, ​​asa mafy" ho tanjona fampandrosoana sy "fahafaham-po ny mpanjifa" toy ny tanjona farany. Vonona ny handroso miaraka amin'ny namana rehetra izahay. Miarahaba antsika mpanjifa an-toerana sy avy any ivelany hitsidika ny orinasanay hitari-dalana. Ny mpiasa rehetra ao amin'ny Hebei Bocheng Co-famarana fandrefesana fitaovana manamboatra Co., Ltd. dia manantena ny hiara-miasa aminao amin-kitsimpo.